Gịnị mere Ị Chọrọ ndabere gị Nokia ekwentị?
E nwere ọnọdụ ụfọdụ ebe ị chọrọ ka ndabere gị Nokia ekwentị. Gụọ banyere ndị na-esonụ ọnọdụ. Ọ pụrụ ịbụ nnọọ ka gị.
* Chọrọ inye, zipu ma ọ bụ na-ere gị Nokia ekwentị na onye ọzọ, ma gị mkpa ndị data na ya.
* Ndabere ekwentị Nokia gị tupu mbịne na Verizon, Sprint ma ọ bụ ndị ọzọ na-agbanweta ihe.
* Your ọhụrụ ekwentị bụ na ka, ya mere ị na-eme atụmatụ ndabere gị Nokia ekwentị maka data Iweghachi mgbe e mesịrị.
* Ị a mgbe ndabere na-ekwentị Nokia gị dị nchebe gburugburu ebe obibi.
* E nwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ na-eduga gị ka ị na-eme ka a ndabere gị Nokia ekwentị.
Olee otú ndabere ekwentị Nokia gị
E nwere ụfọdụ Nokia ndabere software inyere gị aka ime a ndabere gị Nokia ekwentị. Na-esonụ akụkụ, m depụta abụọ ewu omume. Na-agụ na-ahụ onye na-ị chọrọ.
Ngwọta 1. ndabere Nokia (Symbian) ekwentị na PC na 1 click na MobileTrans
Ngwọta 2. ndabere Nokia na Nokia PC Suite
Ndabere Nokia ka PC, ngwa ngwa na mfe
Ndabere gị Nokia, Android ekwentị na iDevice na weghachite ọ bụla na-akwado ekwentị na 1 click.
Ndabere kọntaktị na ozi ederede na ekwentị Nokia gị ka PC na a ngwa ngwa ọsọ.
Ndabere music, video na foto site Nokia ka PC mfe.
Weghachi gị Android ekwentị, iDevice na Nokia ndabere faịlụ na 1 Pịa.
Nyefee na ọdịnaya site Nokia ka Android ekwentị na iDevice effortlessly.
Akwado ọtụtụ Nokia ntị na-agba ọsọ Symbian 40/60 / ^ 3, Windows 8 / 8.1, Android ngwaọrụ na iDevices. Ọzọ ebe a >>
Olee otú ndabere Ndi ana-akpo, SMS, Music, Video na Ndi ana-akpo si Nokia
I kwesịrị ịma
1. Ihe dị gị mkpa: A Nokia ekwentị, a eriri USB, a Windows PC na Wondershare MobileTrans. 2. Ekwentị ekwentị Nyefee mode: Ọ bụrụ na ihe mere na ị ndabere Nokia ekwentị bụ iji weghachi ọhụrụ gị na ekwentị gị nwere ma n'ime ha n'aka gị, ị nwere ike na-eji ekwentị na ekwentị mode ime ka nyefe.
Nzọụkwụ 1. Wụnye-agba ọsọ ahụ Wondershare MobileTrans
Na-amalite na, na-agba ihe omume na kọmputa mgbe nwụnye. Iji mee ka a Nokia ndabere, ị ga-ahọrọ na nkwado ma weghachite mode na pịa ndabere.
Nzọụkwụ 2. ndabere Nokia na ekwentị PC
Bilie gị Nokia ekwentị kwadoro on na-eji eriri USB jikọọ ya na kọmputa. Ozugbo ghọtara ịga nke ọma, ekwentị Nokia gị ga-emere na ekpe. Ọdịnaya na ị nwere ike ndabere na-ticked n'etiti. Ego ọdịnaya na pịa Malite Copy na-amalite Nokia ndabere.
Ọ bụrụ na yoour Nokia ekwentị na-agba Windows 8 / 8.1 usoro, Mobiletrans nwere ike ndabere Photos, Music na Videos ka PC. N'ihi na Ndi ana-akpo, ị nwere ike kwado ha na OneDrive. Mobiletrans pụrụ ịkwado iji weghachi kọntaktị site na OneDrive na ngwaọrụ ndị ọzọ, dị ka Android, iPhone, wdg
Nzọụkwụ 3. Jiri Nokia ndabere File iweghachi gị Android Ngwaọrụ, iDevice ma ọ bụ Nokia ekwentị
Dị ka m kwuru n'elu, ị nwere ike iweghachi ihe Nokia ndabere faịlụ mgbe ị na-a ngwaọrụ ọhụrụ. Ke akpan window, pịa Weghachi ịbanye weghachi page. Jikọọ gị chọrọ ngwaọrụ PC na eriri USB. Mgbe ngwaọrụ ọhụrụ na-egosi na nri, na-aga n'akụkụ aka ekpe na tinye akara Nokia ndabere. Jide n'aka na ọdịnaya na ị chọrọ weghachi. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy na-amalite na-eweghachiri usoro.
Ụlọ ahịa na ntukwasi-obi
All azụmahịa na-echebe site Verisign.
Afọ Ojuju Meela ya n'ezie n'ezie
Ihe niile anyị na ngwaahịa abịa na a ụbọchị 30 ego azụ nkwa.
Email nzaghachi n'ime 24 awa & Live Chat.
Tụkwasịrị Obi site Ọtụtụ nde
Anyị-eje ozi ugbu karịa 30.000.000 ahịa n'ụwa nile.
Olee otú Gbanwee Symbian ka Android?
Otú nyefee ọdịnaya site Nokia ka Android ekwentị?
Olee otú Bugharịa Nokia faịlụ ka Samsung?
Olee otú Detuo faịlụ site Nokia ka iPhone?
Otú nyefee ọdịnaya site iPod ka iPad?
Olee otú Detuo Music si iPod ka HTC?
Olee otú Bugharịa faịlụ site Nokia ka Sony?
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Motorola ka iPhone?
Achọ free ụzọ ndabere ọdịnaya site Nokia ka PC? I nwere ike ịgbalị Nokia PC Suite. Ọ na-enyere ndabere Nokia kọntaktị, kalenda, ederede ozi, ibe edokọbara, ndetu, ntọala na ndị ọzọ na-PC.
Uru: n'efu cons:-apụghị iji nkwado ndabere na mpaghara faịlụ iji weghachi gị Android ngwaọrụ ma ọ bụ iDevice. Music, video na Photos-apụghị kwadoo ozugbo.
Nzọụkwụ 1. Download Nokia PC Suite na kọmputa na-agba ya. Jikọọ ekwentị Nokia gị na kọmputa site na Bluetooth, eriri USB ma ọ Infrared.
Nzọụkwụ 2. Na Nokia PC Suite window, pịa ndabere icon ịbanye Nokia Content Copier window.
Nzọụkwụ 3. Họrọ ndabere na akara ngosi na nne Mmetụta gị chọrọ ọdịnaya. Mgbe ahụ, pịa nri-akụ icon na-amalite nkwado ndabere na mpaghara usoro.
Mụta ihe banyere Nokia PC Suite >>
> Resource> Nyefee> Olee otú ndabere Nokia Ndi ana-akpo, SMS, Music, Video, Photos na Ọzọ na 1 Pịa